Saturday, May 16, 2020 Saturday, January 2, 2021 Jenn Lisak Golding
Ka a na-ebipụta blọọgụ na ebe nrụọrụ weebụ kwa ụbọchị, otu ihe na-echekarị bụ izu ohi nke onyonyo ị zụtara ma ọ bụ mepụta maka onwe gị ma ọ bụ nke aka gị. TinEye, engine nyocha ihe onyonyo, na-enye ndị ọrụ ikike ịchọ otu url maka ihe onyonyo, ebe ị nwere ike ịhụ ugboro ole achọtara onyonyo ahụ na weebụ yana ebe eji ha.
Ọ bụrụ n'ị zụrụ onyonyo ngwaahịa sitere na isi mmalite dịka onye nkwado anyị Depositphotos®, ma ọ bụ iStockphoto or Getty Images, ihe oyiyi ndị ahụ nwere ike igosi ụfọdụ nsonaazụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịse foto ma ọ bụ mepụta onyonyo nke edepụtara na ntanetị, ị bụ onye nwe onyonyo a.
Ọ bụrụ n’enyeghị onye ọrụ ikikere iji ihe onyonyo gị ma ọ bụ na ha anaghị ekwu na ọ bụrụ na ị zigara ya ebe dịka Creative Commons, mgbe ahụ inwere ikike ikpe ikpe megide ndị ahụ.
Offọdụ oké atụmatụ nke TinEye -agụnye:
Ntinye ihe onyonyo kwa ụbọchị maka nsonaazụ ọchụchọ ka mma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri 2 ruo ugbu a
Na-enye a API azụmahịa na ị nwere ike iwekota na njedebe azụ nke saịtị gị
Enyele plugins maka otutu nchọgharị maka adaba nchọgharị
n'ozuzu, TinEye na-eme ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ichebe ihe oyiyi ha na ihe elektrọnik. Gbalia idenye ihe onyonyo inwere ma obu nke imeputara ma kwuputa ndi zuru.
Tags: ochicho onyonyoihe nchoputa onyonyoichigharị onyonyotineye
8dị njirimara XNUMX nke "V" dị ezigbo mma
Mee 19, 2011 na 1: 02 PM
Ndị ọchụnta azụmaahịa na ndị na-emepụta websaịtị amateur na-emehiekarị mgbe ha chere na ihe oyiyi bụ n'efu naanị n'ihi na ha chọtara ya na weebụ. Ọ bụghị na mmemme dị ka TinEye nke na-enyere ndị na-ese foto aka ichebe ha n’onweghị ikike iji ihe onyonyo ha, nwekwara ike imerụ ndị nwe obere azụmaahịa na-amaghị ama na-amaghị na ha na-eji “onyonyo ejiri ikike” ruo mgbe akaha.
Ihe ngwọta anyị, rapara na foto mbụ, ma ọ bụ isi mmalite dị ka iStock na Photos.com